Tamba rotari kubva ku iPhone yako neiyo El Negrito Lottery app | IPhone nhau
Isa mabheti ako paPrimitiva, maEuromillions, Bonoloto nevamwe vane El Negrito Lottery kubva chero kwauri
Kwenguva yakati ikozvino, vashandisi venharembozha vava kugadzikana, nekuti kuburikidza ne smartphone yedu tinogona kuita nhamba yakakura yemabasa ayo kusvika zvino zvaisakwanisika, uye kuti kazhinji Zvakatimanikidza kufamba, kumirira mumitsetse, kutsvaga kupaka….
Chazvino chishandiso chinouya kuApp Store kuita kuti hupenyu huve nyore zviri El Negrito Lotari, chishandiso chatinogona nacho gadzirisa kubhejera kwedu kwese paPrimitiva, maEuromillions, Bonoloto, El Gordo neNational Lottery zvakananga kubva ku-smartphone, pasina kushanyira mapeji ewebhu kana kuenda kune yedu padyo manejimendi manejimendi.
El Negrito Lottery chishandiso chepamutemo chatinogona kutamba neHurumende Lottery uye Kubheja Mitambo, sekugona kwatingaita izvozvi kuburikidza nemutongi wejotari, asi kusiyana neiyi, kuburikidza nekushandisa kwatingaita tora iyo nhamba yaunoda ipapo ipapo uye pasina kumira. Uye zvakare, mangwanani ega ega tinogashira ziviso pane yedu iPhone ichitizivisa nezve mhedzisiro, kutarisa kana takabatsirwa kana kuti tichiri varombo.
1 Kwete makomisheni
2 Nderudzii rwekubhejera rwandinogona kuita?
3 Goverana neWhatsApp neTeregiramu
4 Yakagadziriswa mhinduro
5 Tora 1 mahara euromillion
6 Asi ndiani ari shure kwaLotería El Negrito?
Kuve unotsamira uye kunyoreswa zviri pamutemo kweLottery Administration, iko kushanda nkana inosanganisira chero mhando yekomisheni uye mutengo watichabhadhara pakubhejera kwedu kwese uchave wakanyatsoenzana watichazobhadhara sekunge takabhejera nguva dzose.
Basa iro vese vashandisi vanobheja pachishandiswa ichi vanozokoshesa ndiyo kunanga rubatsiro rutsigiro kuburikidza neapp, rutsigiro rwunotibatsira nguva dzese kugadzirisa kusahadzika kunounzwa kwatiri tichishandisa kunyorera.
Nderudzii rwekubhejera rwandinogona kuita?
NeEl Negrito Lottery application tinogona kuita chero mhando yekubatana muPrimitiva, Bonoloto kana Euromillion, otomatiki kana manyore, emamwe kana akawanda kubhejera. Zvakare, kana gore rega rega uchiwanzo ridza iyo yakafanana nhamba paKisimusi, nekuda kweichi chishandiso iwe unogona tenga nhamba dzako zvakananga Pasina kuenda kunotsvaga manejimendi akasiyana uko kupihwa mubairo, chinhu chinoitwa nevashandisi vese gore rega.
Goverana neWhatsApp neTeregiramu
Imwe yenyaya nyowani inokwezva kutariswa kweiyo El Negrito Lottery kunyorera mukana wekugona taura zvakananga mabheti edu uye mibairo neshamwari dzedu kuburikidza neWhatsApp kana Teregiramu, ficha iyo parizvino isingawanikwe mune chero chimwe chinhu chakadai. Nenzira iyi tichakwanisa kukurumidza kugovana mabheti atinoita pamwe neshamwari dzedu.
Nguva imwe neimwe dhizaini painoitwa, nhamba dzakapihwa dzinozoonekwa mangwanani anotevera, chimwe chinhu chinokosheswa kune avo vanogara vakamirira nguva dzese kana dhiri richiitirwa kutarisa kuti vakunda here kana kuti zvinosuruvarisa kuti vanofanira kuramba vachitamba.
Kana uchiisa vachibhejera zvinhu, iko kushanda kunotipa nguva yakatarwa yakafanana neyaLottery manejimendi, 20:XNUMX pm, nenzira iyi tinogona kumirira zviripo kusvika nguva yekupedzisira kana tichiita mitambo yedu yenguva dzose kana kubhejera, tisingamhanye vasati vativhara.
Tora 1 mahara euromillion
Dhawunorodha iyo app uye shandisa kodhi SUPERBOTE uye iwe uchawana 2,5 euros ye100 Million EuroMillions jackpot neChishanu 30/06/2017. Rangarira kuti iwe unogona chete kushandisa kodhi kusvika Chishanu pamberi pekukwevera. Uye kana iwe usiri kuda kuve wega murionea weshamwari dzako, igovane navo.
Asi ndiani ari shure kwaLotería El Negrito?
Iyi inogona kunge iri poindi yekuti vashandisi vanonetsekana zvakanyanya sezvo vachifanira kupa kuvimba kwakaringana kumushandisi kuitira kuti vagone kunzwa kubiridzirwa chero nguva. Kuseri kweichi chishandiso ndiyo Kutungamira kweLottery nhamba 6 yeAlicante, lottery manejimendi anga ari mubhizinesi kweanopfuura makore zana. Nenzira, ndiri kubva kuAlicante sezvandiri, ndinoziva kuti kwemakore mazhinji ndatenga rotari mune ino lottery manejimendi, mukuru kudhorobha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Isa mabheti ako paPrimitiva, maEuromillions, Bonoloto nevamwe vane El Negrito Lottery kubva chero kwauri
iOS 11 inotizivisa kana iko kushandisa kunoshandisa nzvimbo kumashure
Apple inoda vagadziri kuchinjira kune iyo nyowani App Store